काठमाडौंमा आइपुग्यो भीभीआइपी चढ्ने डेढ अर्बको हेलिकोप्टर
असोज ३, काठमाडौं । भीभीआईपीका लागि खरिद गरिएको महंगो र अत्याधुनिक नयाँ हेलिकप्टर बिहीबार काठमाडौं आइपुगेको छ।
भीभीआइपीका लागि सरकारले किन्यो डेढ अर्बको अत्याधुनिक हेलिकप्टर
kathmandupress.com . १ बर्ष अघि
काठमाडौं, असोज २ : सरकारले भिभिआइपीहरुले प्रयोग गर्ने गरी अत्याधुनिक हेलिकप्टर खरिद गरेर काठमाडौं ल्याएको छ। सरकारले अतिविशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी) का लागि एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्चिएर हेलिकप्ट...
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिका लागि डेढ अर्बको हेलिकप्टर आइपुग्यो
kathmandupati.com . १ बर्ष अघि
काठमाडौं – भीभीआईपीका लागि खरिद गरिएको महंगो र अत्याधुनिक नयाँ हेलिकप्टर बिहीबार काठमाडौं आइपुगेको छ। सरकारले नेपाली सेनामार्फत झिकाएको उक्त हेलिकप्टर १८ दिनपछि काठमाडौं आइपुगेको हो। १४ मिलियन युरो...
भीभीआईपीका लागि झन्डै डेढ अर्बको हेलिकप्टर काठमाडौंमा
काठमाडौं : अति विशिष्ट व्यक्ति-भिभिआईपीका लागि सरकारले एक अर्ब ४० करोड लागतमा अर्डर गरेको अत्याधुनिक हेलिकप्टर काठमाडौं आईपुगेको छ। इटालीमा निर्माण भएको उक्त हेलिकप्टर बिहीबार काठमाडौं आईपुगेको हो...
डेढ अर्बको हेलिकप्टर काठमाडौं आइपुग्यो- राष्ट्रपति,प्रधानमन्‍त्री र विशिष्ट व्यक्तिले प्रयोग गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रपति, प्रधानमन्‍त्रीलगायतका अति महत्वपूर्ण व्यक्तिको लागि प्रयोगमा ल्याईने अत्याधुनिक हेलिकप्टर बिहीबार हिजो काठमाडौं ल्याइएको छ । बिभिन्न मुलुक हुँदै झण्डै ४६ घण्टा उडेर बिहीबार ...
भिभिआइपीका लागि खरिद गरिएको १ अर्ब ४० करोडको हेलिकोप्टर काठमाडौं उत्रियो
बिजनेस लाइभ काठमाडौं– सरकारले अति विशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी) का लागि भन्दै खरिद गरेको हेलिकोप्टर काठमाडौं आइपुगेको छ। १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको हेलिकोप्टरले आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रि...
डेढ अर्बको हेलिकप्टर चढेर पहिलो उडानमा कहाँ जाँदैछन् प्रधनमन्त्री
काठमाडौं, असोज २ । भिभिआइपीका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा किनेको हेलिकोप्टर काठमाडौं आईपुगेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विशेष यात्राको लागि प्रयोग हुने जनाइएको उक्त हेलिकप्टरको नाम अगस्टा ...
डेढ अर्बको हेलिकप्टरबाट पहिलो उडानमा कहाँ जाँदैछन् भिआइपी
काठमाडौं आइपुग्यो भिभिआइपी चढ्ने सरकारको हेलिकोप्टर
khabarhub.com . १ बर्ष अघि
प्रतिकात्मक तस्वीर काठमाडौं– नेपाल सरकारका अतिविशिष्ट व्यक्तिहरु (भिभिआइपी) को सवारीका लागि खरिद गरिएको हेलिकोप्टर काठमाडौं आइपुगेको छ । इटालीबाट खरिद गरिएको हेलिकोप्टर नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्न...
भीभीआइपी चढ्ने डेढ अर्बको हेलिकोप्टर काठमाडौंमा
काठमाडौं । भीभीआईपीका लागि खरिद गरिएको महंगो र अत्याधुनिक नयाँ हेलिकप्टर बिहीबार काठमाडौं आइपुगेको छ। सरकारले नेपाली सेनामार्फत झिकाएको उक्त हेलिकप्टर १८ दिनपछि काठमाडौं आइपुगेको हो। १४ मिलियन युर...
काठमाडौं : भीभीआईपीका लागि खरिद गरिएको महंगो र अत्याधुनिक नयाँ हेलिकप्टर बिहीबार काठमाडौं आइपुगेको छ। सरकारले नेपाली सेनामार्फत झिकाएको उक्त हेलिकप्टर १८ दिनपछि काठमाडौं आइपुगेको हो। १४ मिलियन युर...